UKUHLALA UKUYEKA - 802Quits
Ikhaya » Ama-Vermonters » UKUHLALA UKUYEKA
Siyakuhalalisela ngokuthatha isinqumo sokuhlala ungasebenzisi ugwayi!
Ukuthi lona ngumzamo wakho wokuqala noma usuyekile kaningi ngaphambilini, ukuhlala ungenalo ugwayi kungukugcina, okubaluleke kakhulu, futhi okuvame ukuba yingxenye enzima kunazo zonke yenqubo yakho. Qhubeka uzikhumbuze ngazo zonke izizathu okhethe ukuyeka ugwayi. Yazi ukuthi ama-slips angenzeka, futhi lokho akusho ukuthi kufanele uqale phansi. Ngamathuluzi nezeluleko zamahhala ezitholakala lapha, kungenzeka ukuthi uhlale ungagwayi.
Amathuluzi Okuyeka Ukuzijabulisa>
Ungaziphatha Kanjani Izifiso>